भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले पायो नयाँ भवन : लायन्स क्लबकी डा. हिलद्वारा हस्तान्तरण — Bhaktapurpost.com
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले पायो नयाँ भवन : लायन्स क्लबकी डा. हिलद्वारा हस्तान्तरण
लायन्स क्लब इन्टरनेशनलको अनुदानमा निर्मित भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसको नयाँ भवन हस्तान्तरण गरिएको छ । क्लबकी तृतीय प्रमुख डा पेट्टी हिलले भवन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
शुक्रवार भक्तपुरको दुधपाटीस्थित क्याम्पस प्रांगणमा एक विशेष कार्यक्रमका बीच भवन हस्तान्तरण भएको हो । लायन्स क्लब इन्टरनेशनलको तर्फबाट ‘थर्ड प्रेसिडेन्ट’ डा पेट्टी हिलले भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पोखरेललाई सांकेतिक साचो प्रदान गर्दै भवन हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
उक्त अवसरमा बोल्दै शिक्षा एवं बाल मनोविद समेत रहेकी डा हिलले क्याम्पस भवन बनाउनु भनेको विद्यार्थीको भविष्य बनाउनु भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेकी थिइन् । शिक्षा बिना समाज अघि बढ्न नसक्ने भन्दै डा हिलले शिक्षा क्षेत्रमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताइन । नेपालमा लायन्स क्लब इन्टरनेशनलले थप सहयोग गर्ने समेत उनले प्रतिवद्धता प्रकट गरेकी थिइन् । क्यानाडाकी नागरिक डा हिल इटालीमा भएको क्लबको गत निर्वाचनमा लेबनानको प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै थर्ड प्रेसिडेन्ट बनेकी थिइन् । नेपाललाई माया गर्ने डा हिलले भक्तपुरको क्याम्पस भवन बनाउन क्लबको तर्फबाट अनुदानको पहल गरेकी भक्तपुर पोस्टलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।
लायन्स क्लब इन्टरनेशनलको बहुजिल्ला ३२५ नेपालले दुई करोड छ लाखको लागतमा दुई तलाको आठ कोठे पक्की भवन बनाइदिएको क्याम्पस प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए । भवन सगै पठनपाठनमा आवस्यक फर्निचर र शौचालय समेत बनाइदिएको उनको भनाइ छ । नयाँ भवन पाए संगै विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने क्याम्पस प्रमुख पोखरेलले बताए ।
भवन हस्तान्तरण पछि डा पेट्टी हिलले रिबन काटेर नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समेत गरेकी थिइन् । उक्त भवन हस्तान्तरण र उद्घाटन कार्यक्रममा उनका श्रीमान् समेत सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी क्लबका नेपाल प्रेसिडेन्ट लगायत व्यक्तित्वहरु, भक्तपुर क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु, शिक्षाप्रेमी र विद्यार्थीहरु वर्षाको बाबजुद कार्यक्रममा सहभागी बनेका थिए ।